Posted in: ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးများ
ကျောက်နီမော် မုဒိန်းလူသတ်မှုမှာ အခုဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းထဲ တွန်းပို့ချင်တော့ ဒေါ်စုက မြန်မာဖက်ကပါရင် ဘင်္ဂါလီဂျီဟတ်ကို ဖွင့်ပေးပြီး လာရှင်းခိုင်းမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဖက်က ပါရင် နိုင်ငံရေးအရ ကိုယ်လည်ပင်း ကိုယ်ကြိုးတပ်မိလျက်သား.. DILEMMA ။ စစ်တုရင် စကားနဲ့ ဆို အပိုင်ခွချက်ဘဲ။ ဒေါ်စုက တစက်မှ-မဟတော့ ပြဿနာက အမှိုက်မီးကနေ ပြဿဒ်မီးစွဲတော့တာ။ ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်။ ခုတော့ မရှင်းတတ်ကြ။ အရေးထဲ မာနက
ကြီးကြီး ငါတို့လာက် မသိမတတ်။
အခုသူတို့ က အမေရိကန် ပွဲစားကို ပုံအပ်ရတယ်လို့။ လုပ်လိုက်ရင် တလွှဲချည်းဘဲ။ သမ္မတလစာက တလ သိန်း ၅၀ (ဒေါ်လာ ၅၀၀၀)။ သမ္မတဘေးက ဝန်ကြိးတွေ( ၆ ဦး) ရဲ့ လစာက တဦး၃၀ x ၆ = သိန်း၁၈၀။ ဒုဝံတွေ ၊ မပါသေး။။ အကြံပေးတွေငှားထားတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ တဦးကို တလ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀-။ သိန်း၁၀၀ ဝန်းကျင်။ သမ္မတထက်တောင် ဈေးကြီးနေသေး။
၂၀၀၅ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ကျနော်မလေးရှားရောက်ပြီး လကုန်ခါနီး ဒုက္ခသည်လျောက်တယ်။ ၂ -
ကြိမ်တိတိ လျောက်တာ လက်မခံပါ ။ ကျနော့်မှာ အကျဉ်းဦးစီးက ထောင်ထွက်လက်မှတ်၊ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီ ICRC ကထုတ်ပေးတဲ့ ထောင်ထွက်လက်မှတ် (နံပါတ်တွေပါတယ်) နှင့် ICRC ကထုတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနင့်ထောင်ကျထားသူဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်ကဒ်ပြား (နံပတ်ပါသည် ) ကိုတင်ပြလဲ ..ငါတို့လူသစ်လက်မခံသေးဘူးငြင်းပြီ; လိမ်လွှတ်တယ်။ နေ့ တိုင်းတရက်ကို လူသစ် ( မှတ်ပုံတင်အသစ် ) ၁၅ ကနေ ၂၅ ယောက်လူသစ်လက်ခံနေတာ
အဲဒီ နီပေါက ကျနော်တို့ ဒုက္ခသည်ရုံးရဲ့ခင်ဗျားလိုနိုင်ငံရေးအမှု ထိပ်ဆုံးဥိးစားပေး ဟုပြောပါတယ် ၊ အခုမဟုတ်တဲ့ လူလိမ်တွေကိုတော့ ဦးစားပေးနေတယ်။ တကယ်ပေးရမဲ့သူကျတော့ လိမ်ထုတ်နေတယ်ပြောပြီး ကျနော်ရဲ့ လက်မှတ်မိတ္တူတွေကို
ပင်မရုံးကြိးဖက် ယူသွားတယ်။ မိနစ် ၂၀-လောက်နေတော့ သူပြန်လာတယ်။ ပြင်သစ်တယောက်လိုက်လာပြီး ကျနော့်ကိုတွေ့ တယ်။ ခနနေတော့ ဟိုကုလားမက အပြင်လူတွေကြားထဲမှာ ရာဇဝင်တွေကို လာမေးတယ်။ လူတွေကြားမှာ မေးခွင့်လုံးဝမရှိ။ နီပေါက လာကြည့်မှ ကျနော့်ကိုအထဲကိုခေါ်ပါတယ်။
နောက် ၁-ပတ်နေ လာခဲ့ရန်ရက်ချိန်းပေးတယ်။ မတ်လဆန်းပိုင်း ။ အဲဒီမှာ ပြင်သစ်တယောက်နဲ့ဖြေရတယ် ။ ပထမအဆင့် P- 1 ကဒ်ပြားထုတ်ပေးတယ် ။ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ပြန်ချိန်းတယ် ။ တခါဖြေပြီးရင် တဆင့် တိုးပေးတယ် ။ အဆင့် ၆ ခုရှိတယ် ။ ၆ - ခုပြီးမှ RSD တတိယနိုင်ငံကို ခိုလှုံခွင့်အဆင့်
သတ်မှတ်လက်မှတ် ( ကဒ်လေး ) ထုတ်ပေးပါတယ် ။ ထိုအဆင့်ရောက်ရန် ၂-နစ်မှ ၄ နစ်အထိကြာတတ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်- ထို ပထမအဆင့် ချိန်းလိုက်သော နိုဝင်ဘာလ
၂၄ ရက် မတိုင်မှီ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့ပါသည်) ။
ထိုလက်မှတ်ရပြီးလျင်ပင် တတိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ က နောက်ထပ် ၂
နစ်ကနေ ၅ - နစ်လောက်ထပ်ကြာတတ်ပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ၃-နစ်ကနေ ၅ နစ်အထက်ကြာတတ်ပါတယ် ။
ယူအန် အရာရှိတွေက ဒါအခွင့် အရေးမဟုတ် ၊ ဦးစားပေးမှု ၊ အထူး အကူအညီသာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ This is not your RIGHT, it is just
the PRIVILEGE .လို့ ရှင်းပြပါတယ် ။ မရပါ။ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုူသူတွေ ယူအင်ရုံးကို ခဲတွေနဲ့ လာပေါက်လို့ရဲလုံခြုံရေး
ဘုရာဖူးရင်း လိပ်ဥတူးရင်း။ အများစုက လိမ်လျောက်ကြတာဘဲ။ အရင်းမရှိ လှေထိုးလိုက်သလို ..ရိုဟင်ဂျာနေကြတာပါဘဲ။ နောက်ပိုင်း တတိယနိုင်ငံတွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ လက်ခံမိပြီး လက်လန်ကုန်ကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆုိုတာနင့်
ကိုလက်မခံတော့ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် လက်မှတ်ကိုင်ထားသူတွေ ရွာလည်တော့တာပါဘဲ ။ ဘယ်နို်င်ငံကမှ လက်မခံချင်ကြတော့ဘူး။
ပတ်စပို့ နင့် အလုပ်လာလုပ်သူ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံသားတွေထဲကလည်း ရိုဟင်ဂျာလိမ်လျောက်သူတွေ တပုံကြိး။ နာမည်လိမ်တွေနှင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဆုံဖူးတာ အများကြိး။ အခုရိုဟင်ဂျာလက်မှတ် ကိုင်ဖူးသူ မြန်မာပြည်က ဗမာစကားတတ် ၊ ဘင်္ဂါလီစကားမတတ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာလိမ်လျောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်မနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်ကုန်ကြတာ မနည်းတော့ဘူး။ မလေးရှားမှာ
ဒုက္ခသည်လက်မှတ်ကိုင် ရီုဟင်ဂျာ တသိန်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်နို်င်ငံကမှ
အဲဒါကြောင့် လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေကိစ္စ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေက တင်ပြနေတာ
၂၀၀၄ ခုနစ်ကထည်းက့ပါ ။ အခု ထိုင်းမှာမိတော့မှ..။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ပေါ်ကုန်တော့မှ လူကြားကောင်းအောင်လုပ်နေတာပါ ။
ကနေ့တခြားမကြည့်ပါနင့် ။ အာရပ်သဘောင်္ပျက်က လာတင်တာက ဆယ်ဂဏန်းပေါ့။ အချိန်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နစ်တထောင်ဝန်းကျင် ။ သူတို
့နောက် အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျတာ အများကြိး။ အထက်စီးကနေ နေတယ်။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုကို မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းစွာသွတ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီတော့ အနှစ် ၁၀၀ အရောက်မှာ ကျနော်တို့ က ဘိုမျိုးဆက်ပါ မပြောရဲတော့တာ..ကို အနှစ် ၁၀၀၀ လူတွေက အာရပ်မျိုးဆက်တွေပါ အော်နေတာ ပြောနေတာ..ချင့်ချိန်ကြည့်ကြပါ ။ သူတို့ သွေးထဲ အာရပ်သွေးပါလှ. ..( 0.0001
% )ဘဲကျန်တော့မည် ။ သူတို့ က အသက် ၉ နစ်ဆို လင်ယူကြရပြီဆိုတော့ အနစ် ၁၀၀ မှာ မျိုးဆက် ၈ ၊ ၁၀-ဆက် ဆက်လောက်ရောက်နေတာနော် ။ မျိုးဆက် ၈-ဆက်နင့်တွက်လျင်ပင် အနစ်၁၀၀ မှာတင် အာရပ်သွေးက ..( 0.75 % )။ 1-% ပင်မရှိတော့ပါ ။
ထိုကုလသမ္မဂ မစ္စတာဘန် ပါးစပ်ပိတ်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း။ သူက ပညာရှင်ဘဲ ၊ ဒီစကားဟလိုက်လျင် သူတို့ ကစားကွက်ကုန်သွားပြီဆိုတာ တန်းသိတာပေါ့။
စက်ဘီးမစီးရဲ လှေမစီးရဲပေမယ့် ငါရဲရဲတောက် နယ်တကာလှည့်ပြီး တရားဟောခဲ့တယ်.."နယ်တကာလှည့်ပြီး ငါပါးမရိုက်ခဲ့ဘူး"
"ဗမာတစ်ကျပ်ဆို ကရင်လည်း တစ်ကျပ်ပဲ"အဲ့ဒါကို ငါ့နှလုံးသားနဲ့ ခေါ်တယ်.."ဘယ်တော့မှ Bullet နဲ့ မခေါ်ဘူး"
ဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက် ငါ့မှာ မြေတစ်ကွက် တိုက်တလုံး ကားတစ်စီး
"ဒီအတွက်ငါ့မှာ ဗိုက်ကို လှန်ပြဖို့ရာ"သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ဒဏ်ရာများမရှိ"
မျိုးဖျက် သစ္စာဖောက် လောက်ကောင်တွေနဲ့တိုက် သူ့ခေါင်းနဲ့
ဆာစတက်ဖို့ ကလစ်ပ်ရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲက ဖောင်တိန်ကို ဆောင့်ဆွဲယူသလို ပါလာခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေး
နောက်တစ်ခါ လွတ်လပ်ရေးအတွက်သမီး အောင် ဆန်း စု ကြည် အဖြစ်နဲ့
မဆလနဲ့ စစ်အစိုးရဆိုတဲ့ (၄၈နှစ်တိုင်) ရှင်ကြီးဝမ်းထဲလည်း ဝင်ခဲ့ဘူးပြီ။
ဒါကိုမှ အားမရသေး နောက်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံရွေးချယ်ဦးမယ် ဆိုရင်တော့ တို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကျတော့မှာလား လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ နိုင်ငံတော်တခုအတွက်
ဒီမိုဝေယံ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြန်လာပြီ
(အပိုင်း ၁)(ကဗျာရှင် ခရမ်းပြာထက်လူ)
ဒီလိုမှန်းသိ ဒီလွတ်လပ်ရေးအကြောင်း ငါမတွေးခဲ့ပါဘူး
ဒန်တေရဲ့ ငရဲခန်း ကမ္ဘာကျော် ကဗျာရှည်ကြီး တစ်ပုဒ်
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာရော သိကြားမင်း ဘာကိုင်ဆင်းလာမလဲ ကျုပ်ပြောမယ်..
ဒီဓားဟာ ကျုပ်နဲ့ ကျုပ်တိုင်းပြည်ကို မျှဉ်းမျှဉ်းသတ်နေတဲ့
အဖေမပေါ်ဘဲ မွေးခဲ့သူတွေကို အထင်ခံခဲ့ရတာကို ဂုဏ်ယူတဲ့အထိ ရဲရင့်ခဲ့သူတို့။
ခုတော့ ငါ့ပုံကိုင် ချီတက်လာတဲ့ အရေးတော်ပုံ တပ်သား ငါမြေးမလေးကိုလည်း ပစ်သတ်လိုက်သတဲ့၊
ခင်ဗျားတို့ အမြတ်တနိုးရှိလှတဲ့ ပိုက်ဆံတွေပေါ်က မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်၊
ပြည်သူတို့ လွတ်လပ်ရေးရပြီး လွတ်လပ်ရေး ကျပျောက်သွားခဲ့မှန်း ကျုပ်သိတယ်။
ပြည်သူတို့ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ညတွေ သိပ်နက်ခဲ့ကြောင်း ကျုပ်သိတယ်။
ပြည်သူတို့ ပုလဲသီ တကွဲစီကွဲကွာသွားခဲ့ကြတဲ့
ပြည်သူတို့ ကျုပ်သားတွေဟာ ဓားအချောင်းချောင်း ဆိုပေမယ့်
ခေတ်သစ် အဇာတသတ်တွေ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကျုပ်တို့ အဖဗိုလ်ချုပ် မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် သွေးတစက် အမေစုကို ထားခဲ့တယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော် ဦးသိန်းစိန်ဥိးဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ထောက်ခံလို့ .. (၃၁၊၁၊၃) မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ရောက်တော့ သတင်းဌာန တချို့ လာပြီး အင်တာဗျူးပါတယ်။ မိခင်နှင့် သမီးဖြစ်သူက ကျနော် ကစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ဘွင်းဘွင်းကြီးပြောချလိုက်မှာ စိတ်ပုပြီး အတင်းဆွဲခေါ်ထုတ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးတာ ခနလေးဘဲ ရလိုက်ပါတယ်။ သတင်းဌာနတွေ၏ ပထမ ဦးဆုံးသောမေးခွန်းက ..ယ္ခုလက်ရှိသွားနေတဲ့ အစိုးရ၏လမ်းစဉ်ကို
လက်ခံလို့ပြန်လာတာပါလားတဲ့ ။ ကျနော်စိတ်ရင်း အတိုင်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် ။ ကျနော့်နိုင်ငံရေးက လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရေးမူ။ လက်တွဲခွင့်မရှိလို့ တိုက်ခဲ့တာပါ။ သူရဲကောင်းလိုလို အတည်ပေါက်နဲ့သတ်ကွင်းထဲမလာဘဲ အာနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ ယ္ခုသွားနေတဲ့လမ်းဟာ ကမ္ဘာမှာ အသင့်တော်ဆုံးလမ်း။ ယ္ခုကြည့် လစ်ဗျား၊ အီဂျစ်၊ တူနီးရှား ၊ ဆီးရီးယား..ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီလဲ လို့ကျနော်ဖြေခဲ့ပါသည်။ ယခုပြန်လာတာကလည်း အစိုးရက ကျနော်တီထွင်မှု ဒီရေစီးကနေ လျပ်စစ်ထုတ်လုပ်တာကို မူပိုင်ကို ကျင့်သုံးခွင့်ပေးလျင် မြန်မာပြည်မှာ လျပ်စစ်ကို တယူနစ်ကို ၃၅ ကျပ်နှင့်
လိုသလောက်ရောင်းပေးရန်ပြန်လာတာဟု ဖြေခဲ့ပါသည်။ (မှတ်ချက်.....ကျနော်ဟာ ၈၈၈၈ နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီခန့် မှာ၊ ရန်ကုန်- ကုန်သည်လမ်းမှာ ပထမဦးဆုံး စစ်ကြောင်းကို ညာသံတိုင်ပေးပြီး ဦးဆောင်ဖေါက်ထွက်ခဲ့သူပါ) အခြားကျောင်းသား ဦးဆောင်စစ်ကြောင်းတွေ ညနေ ၄ နာရီလောက်မှ ရန်ကုန်မြို့ လည်ကို ရောက်ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ၆ ထပ်တိုက်။ ရေနံရုံးချုပ် ၊ လမ်းဘေးကနေ ဗွီဒီယို ၊ ကင်မရာတွေ အများကြီးနဲ့မှတ်တမ်းယူထားပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဆူးလေလမ်းပေါ်မှာ ကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်တွေ ဗြောင် ဝိုင်းရီုက်နေတာ ကြာတော့ ဒေါကန်လာပြီး
ပုဆိုးလှန် ကော့ပြပြီး.ဒါရိုက်ကွာ လုပ်ခဲ့မိပါတယ်) အဲဒါကျနော့် ခံယူချက်။ ကျနော့်အမြင်။ သဘောတူနိုင်သူရှိသလို..ကိုယ့်အမြင်တော့ ထုတ်မပြဘဲ ဘာဖြစ်ဖြစ် မကောင်းအော်သူရှိမှာဘဲ။ ကျနော် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မိခင်က နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဖို့စကား ခွန်းကြီး ခွန်းငယ်။ ကျနော်က လုပ်သင့်လျင် မလျော့သူ။ မတတ်နိုင်ဖူး။ မိခင်ကတော့ ၂၀၁၄ မေလ လလည်ပိုင်းမှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ မိခင်ကတော့ ကျနော်အပေါ် မကျေနပ်လှ။ သားသမီးတွေအားလုံးကို သားငယ်၊ သမီးကြီး၊ သမိးလတ် ၊ သမိးငယ် ခေါ်၏ ။ ကျနော့်ကို ငယ်စဉ်က တည်းက သားကြီး ၊ သားကြီးနဲ့ဂုဏ်ယူတဲ့လေသံနှင့်။ ကျနော့်အတွက်လည်း သူ့ မှာဂုဏ်ယူစရာတွေက များများ။ နို်င်ငံရေးဖက်လာတော့ အမေက မကြာခန ကျနော့်ကို သားကြီး မခေါ်တော့ဘူး။ မောင်လှိုင်မြင့်ဘဲ ခေါ်တော့တယ်။ သေခါနီးအထိ မောင်လှိုင်မြင့်ဘဲ ခေါ်တော့တယ်။ တကယ်က ရွာတရွာလုံးက ကျနော်ကို မောင်ဘီ ၊ ဘီလီ ဘဲခေါ်ကြတာ။ ရွာကလူတွေက လှိုင်မြင့် လို့တဦးမှ မခေါ်တတ်ကြဘူး။ လှိုင်မြင့်ဆိုတာ ၁၀-တန်းဖြေခါနီးမှ
မှည့်တဲ့နာမည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာလဲ ဘီလီ လို့ ဘဲသိကြတာ ။ ...သားကြီးဆိုတာ. ရန်ကုန်.ပြန်ရောက်စကသာ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဖို့ တာတားကနေ..သားကြီးဆိုတာကို
အမေက မခေါ်တော့ဘူး ။ မတတ်နိုင်ဘူး ။ မိခင်ကျေးဇူးတွေကြီးပေမည့် ကျနော့်ပြည်သူတွေလည်း ကျနော်အပေါ်ကျေးဇူးတွေ အများကြီး။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာ မျက်ကွယ်မပြုနိုင်ဘူး ။ မိခင်ကို နားလည်အောင်တော့ ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေကတော့ သား သမီးထဲမှာ ခေါင်းအမားဆုံးလူ။ မိဘကို ပြန်အပြောဆုံး..လို့ မြင်ခံရသူ။ ကျန်သားသမိးတွေက တခွန်းမှ ပြန်မပြောကြဘူး။ တခွန်းဆို တခွန်းမှ။ ကျနော်တို
့မောင်နမတွေက မိဘကို နည်းနည်းလေးမှ စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ကြဖူး။ ကျနော်ကလွှဲလို့ ပေါ့။
ကျနော်က ငယ်ငယ်ကထည်းက ပြသနာကောင်။ အိမ်မှာ အတီးအခံရဆုံး။ အမေပေးထားတဲ့ နာမည် အများကြီး..တခုက ( မိုးဇာဗျော ) စစ်ကိုင်းမြို့ က မိုးဇာအရပ်က နိုင်ငံကျော် ဗျောအဖွဲ့။ ကျနော့်ကိုတီးရလွန်းလို့ဗျောကြီးလို့ ခေါ်ကြတာ။ အရပ်က ကျနော့်ကို ဗျောကြီးလို့နာမည်ပေးထားကြတာ။ အဖေကတော့..အချစ်ဆုံး..။ .ဒါပေမည့် အိမ်မှာ အဖေက ကြိမ်တချောင်းကို ကျန်လူတွေအတွက်ထား၏။ ကျနော့်အတွက်က သီးသန့်ကြိမ်တချောင်း..ကဗျည်းထိုးထားတယ်။
BILLY..ဟိုကြိမ်က တလ တခါ မထုတ်ရဘူး။ ကျနော့်ကြိမ်က တပတ်တခါ။ ဟိုကြိမ်က ခါရိုက်ရင် ၁ ၊ ၂ ချက်။ BILLY ကတခါရီုက်ရင် ၅ ချက်ဘဲ ။ အမေ ဆုံးခါနီး...နောက်ဆုံး သတိမရတရမှာ ဗလုံး ပထွေး စကား နစ်ခွန်းပြောသွား၏။ မေမေ သတိမရတရမှာ ညီငယ်က ဖုံးဆက်ပြီး..ကိုကို မေမေ အခြေအနေ ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတယ်...မေမေကြားနေရပေမည်။ အဲဒီမှာ..ခနနေတော့...အော်သား ကြီးလာပြီလား ..သားကြီးလား... မသဲမကွဲစကားလေး နောက်ဆုံးပြောသွားပြီး..ခေါ်မရ တော့ပါ။ ..ဆုံးခါနီး နောက်ဆုံး စကား .။ မိခင်ဆုံးပြီးတော့ အမ ၊ ညီမတွေ။ ညီတွေက ကိုကို ကိုကိုဆောင်းပါးတွေရေးလျင်
နိုင်ငံရေးကိုတော့ ရှောင်ရေးပါ။ အတန်တန်မှာကြ ပန်ကြားကြ၏ ။ ချိုချိုသာသာလေးရေးပါ။ ကိုကိုရေးရင် တစ်တစ်ခွခွတွေချည်းဘဲ။ တဖက်က မခံသာဘူး။ ဘာဘူတို့၊ ဘုတ်ဘုတ်တို့ လဲ ထိခိုက်ခဲ့တာတွေများလှပြီ။ မှန်ပါသည်။ ကျနော့်ကြောင့် သား နှင့်သမီး အခက်အခဲတွေ ကြုံကြရပါသည်။ ကျနော်လက်ရှောင်နေခဲ့တယ်။ ရင်ထဲတော့ ဘယ်လိုလုပ်နေရက်ပါ့မလဲ ။ ကနေ့ တော့ မောင်နှမတွေ၊ ဝမ်းကွဲတွေညီအကိုတွေ၊ သား နင့် သမီးတို့ ကို ကျနော်နေနိုင်သလောက် ငြိမ်ခဲ့ပြီးပြီး..ခုမနေနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော့်ကိုနားလည်ပေးကြပါတော့ ပါပါကြီးကို နားလည်ပေးကြပါတော့ဘဲ ပြောပါရစေတော့... ယ္ခုဆောင်းပါးကလည်းအကြံပြုစာပါ။ သမ္မတကြီးကို ဦးတည်ပြီး အကြံပြုစာပါ ။ ခြိမ်းခြောက်စာ..ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူး ။ ( သူတို့ က ပြန်ဝေဖန်လျင် အဲဒီလို အကြောင်းပြတတ်လို့ ပါ )။ သမ္မတကြီး ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်ရေးရမှာပါ ။ ပြည်သူက ဆုံးဖြတ်မှာပါ ။ ကျနော်လည်းဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိသလို ၊ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်လည်း လိုချင်တဲ့ သမိုင်းမရနိုင်ပါဘူး ။ သမိုင်းဆိုတာ ပြည်သူက သတ်မှတ်တာပါ။ မြန်မာ့သံယံဇာတ ထုတ်ရောင်းရေး မရောင်းရေး...ကျနော်က ထုတ်ရောင်းရေးသမားပါဘဲ ။ တချို့ က ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ၊ သမိုင်းဝင် သိမ် ၊
စေတီ ၊ အကြောင်းပြ ။ ကျနော်က ထုတ်ရောင်းရေးဘဲ။ ဘိုးဘွား လာမပြောပါနဲ့။
ယနေ့ မန္တလေးကိုသာကြည့် ၊ မြန်မာတွေ ၊ မိဘဘိုးဘွားခေါင်းချသွားတဲ့အိမ်တွေကို လူမျိုးခြားတွေကိုထိုးရောင်း...မြို့ စွန်ပြေးနေသူတွေ ကို အရင်သွားပြော။ ကျနော်တို့ မောင်နမတွေ ဖခင်ကြီး အသက်နဲ့ ရင်းပြီး တပ်မတော်ကရလာတဲ့ ပင်စင်ငွေလေးရောင်းပြီး ဝယ်ထားတဲ့မြေ၊ ဖခင်ကြီးခေါင်းချသွားတဲ့မြေ။
မောင်နှမထဲကဘယ်သူမှ လဲမနေတော့ဘူး၊ မရောင်းဖူး ။ ညီမအငယ်ဆုံးက အိမ်စောင့် ။
ကျနော်တို့ မောင်နမထဲက မိသားစု ( ၄ - စု ) က နိုင်ငံခြားရောက်နေပြီ။ ဖခင်ခေါင်းချခဲ့တဲ့မြေ မရောင်းနိုင်ဘူး နောင်လဲမရောင်းဘူး။ ယ္ခုလက်ပတောင်းတောင် ဒေါ်စုကလည်း ဆက်လက်တူးဖေါ်ရေး။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ဒီလောက်ဆင်းရဲချို့ တဲ့ နေချိန်...ကျွန်စုတ်တဲ့ သရက်စေ့ ဘဝရောက်နေချိန် ဘိုးဘွားအော်နေတာ....အော်နေသူတွေ ဘယ်လိုစားသောက်နေကြသူတွေလဲ
ဥပမာပေးပါမည်။ လူတယောက် သွေးထွက်လွန်ပြီး သွေးမသွင်းလျင် သေချာပေါက်သေတော့မည်။ သွေးလှုနိုင်သူတွေနဲ့သူ့ သွေးက မတည့်။ တည့်သူက တဦးတည်း....သို့ ပေမည့် HIV ပိုးရှိနေသူ။ ဘယ်လိုဆုံုးဖြတ်မလဲ ။ ဆေးကျောင်းမှာ အလားတူ ဥပမာ သင်ခဲ့ရပါသည်။ (ထိုစဉ်က HIV မပေါ်သေးဘူး ) လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ..ယောက်ျားက
မိန်းမ၏သွေးကို လက်ခံလို့(သွင်းလို့ ) ရ၏။ ယောက်ျား၏ သွေးကို မိန်းမကို သွင်းလို့ မရ (ငယ်ရွယ်စဉ် )။ ချစ်သူရည်းစားကိုသွေးလှုမည့်သူတွေ
စဉ်းစားဖို့။ သို့ သော်အရေးပေါ်လိုအပ်လာလျင် သွင်းရမည်သာ။ ယောကျာ်း၏သွေး
ဇနီးမယားကိုလှုလျင် ဘာဖြစ်တတ် ဆရာဝန်တွေကိုသာမေးကြပါ။ ဆက်ရလျင် လက်ပတောင်းတောင် ဆက်တူးပါ။ တူးရပါမည်။ သို့ သော် ဒီစီမံကိန်းဟာ အလွန်အကျိုးအမြတ်ကြီးမားပါသည်။ ရှုံးသွားရန် လုံးဝ မရှိသော..မြေကြီးလက်ခတ်မလွှဲ အကြီးအကျယ်မြတ်မည့် စီမံကိန်း။ ဒီလောက်အမြတ်များမည့် စီမံကိန်းကို ဆက်လက်တူးဖေါ်ဖို့ က..စာနာစိတ်ရှိသူတွေကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေသင့်ပါသည်။
မြန်မာစိတ် မွေးနိုင်သူတွေကိုသာ လုပ်ဆောင်စေသင့်ပါသည်။ ဘီလူးစိတ် ၊ ဓါးပြစိတ်ရှိသူတွေကို နိုင်ငံ၏ရတနာသိုက်ကို တူးဖေါ်ခွင့်မပေးသင့်ပါ ။ မြန်မာပြည်မှာ အနှစ် ၅၀ လောက်လာတူးမှာ... နဂါးပြည် နဂါး ၊ ဂဋ္ဋုန် ပြည် ဂဋ္ဋုန်။ Be Roman in Rome..တရုတ်တွေ အကျိုးအမြတ် လိုချင်လွန်းလို့ ၊
ငန်းငန်းတက်လာတူးတာကို မြန်မာက တရုတ်ဓလေ့ကို တရုတ်လောဘကို လို်က်ရမှာလား ၊ တရုတ်က မြန်မာ့ဓလေ့ ကိုလိုက်နာရမှာလား..သမ္မတကြီးခင်ဗျား။ ယနေ့လက်ပတောင်းမှာ ဖြစ်ရတဲ့ ပြဿနာ၏ အစက တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်က မီးစ။ ပြည်သူကို လူမထင်ခဲ့။ ဖုတ်လေတဲ့ ငါးပိ ရှိတယ်တောင်မထင်ခဲ့တဲ့။ တပ်မတော်သာအမိ ဆောင်ပုဒ်ရဲ့ အကျိုးဆက်။ တပ်မတော်ရဲ့ စီးပွားရေးလက်တံ ဖြစ်တဲ့ ဦးပိုင်ရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် လည်ပင်းညစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်က အရင်းခံ ။ တရားခံစစ်စစ် ။ ဦးပိုင်၏ ဆောင်ပုဒ် ၆ -ခု မှာ နံပတ် ၆ -ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေး ရေးထားပါတယ် ။ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေး။ လုပ်နေတာက လယ်ယာတွေပေါ်မှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသူ ပြည်သူတွေဆီက လယ်ယာတွေ လျော်ကြေးမပေးဘဲ သိမ်းချင်တဲ့စိတ် ။ တောင်သူတွေမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း..ဒါလေး
( တစ်ခုထည်းဘဲ ) ရှိရှာတာ ။ ဦးပိုင်က လူကြီးတွေလို အကောင်းဆုံးကား အစီး ရာချီမပိုင်ပါဘူး ။ အိမ်ကောင်းကြီးတွေ ဆယ်ချီပိုင် ဒေါ်လာနဲ့ ငှားစားနိုင်ဖို့ ..အိမ်မက်တောင်မမက်ရဲသူတွေပါ။ လူကြီးလူကောင်းဆိုတာ..ကိုယ်ထက်နိမ့်ပါးသူတွေကို
ညှာတာရပါတယ်။..ကိုယ်( တပ်မတော် ) အနစ်၅၀ အုပ်ချုပ်လိုက်လို့ငါတို့ မြန်မာတွေ မွဲပြာစုပ်ပြတ်သတ်သွားတယ် မြင်သင့်ပါတယ် ။ တပ်မတော် အာဏာမသိမ်းခင်က မြန်မာဟာ အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ရွှေခေတ် ။ ယနေ့ မြန်မာတွေဆင်းရဲသွားတာ တပ်မတော်မှာ တာဝန်အရှိဆုံး ။ ငြင်းချင်လျင် တီဗွီပေါ်မှာ စကားရည်လုပွဲလေး လုပ်ပါဗျာ။ ဦးပိုင်ဟာ တောင်သူတွေအပေါ် စာနာရမှာပါ ။ ကိုယ်က လက်ပတောင်းတောင်ကိုမတူးရလဲ..ဆယ်သက်စားမကုန် ၊ ဖြုန်းမကုန်အောင် စုမိထားသူတွေ (တကယ်က ခိုး ) ထားနိုင်သူတွေပါ။ ဥိးပိုင် လူကြီးတွေထဲက လက်ပတောင်းတောင် ဆက်မလုပ်ရလျင် ငတ်မည့်သူရှိလျင်ပြောပါ ။ ကျနော်တို့ကိုယ်စားနိုင်တာထက် တဆပိုပြီး သေသည်အထိ ထောက်ပံ့ပါမယ်။ ဘီလူးတောင် ဘီလူးစည်းရှိလို့၊ လူ့ စည်း ၊ ဘီလူးစည်း ဆိုတဲ့စကားပေါ်လာတာပါ။ ဘီလူးဆိုတာ ဒုက္ခပေးချင်လျင် စိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုထားပေမည့်
ဘီလူးစည်းကိုစောင့်ပါတယ်။ ယ္ခု ဥိးပိုင်ကလည်း လူ့ စည်းကိုစောင့်ပါ။ လူ့ စည်းကို မလိုက်နာနိုင်လျင်တောင် အနိမ့်ဆုံး..သူခိုးစည်းကိုတော့ လိုက်နာပါ။ ဒီတော့ သူခိုးစည်းဆိုတာက ဘာလဲမေးစရာ။ သူခိုးစည်းက ခပ်များများ။ ဒီထဲက အရေးပါတာလေးတခုက သူခိုးတွေဟာ မိမိထက်ဆင်းရဲသူဆီက ဘယ်တော့မှ မခိုးရဆိုတဲ့ စည်းလေးပါ။ ယနေ့ ဥိးပ်ုိုင်က နိုင်တော်က လယ်တွေကိုပိုင်တယ် ပြောပြီး လျော်ကြေးမပေးဘဲ သိမ်းယူတာဟာ တကယ်တော့ လုယူနေတာပါ။ မိမိကတော့ အိမ်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ သိန်းထောင်ချီတန် စိန်နားကပ်ကြီးတွေ ပန်ပြီး...ငတ်သေလုဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆီက အတင်းအဓမ္မလုတာဟာ သူခိုးစည်းထက်နိမ့် သွားပါပြီ ။ သူခိုးစိတ်ဓါတ်ထက် နိမ့်သွားပါပြီ။ မြေဆိုတာ လယ်ယာအဖြစ် သူ့ သဘာဝအတိုင်းပေါ်နေတာ ကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူက
ပြုပြင်ထားလို့စိုက်ပျိုးနိုင်တာပါ။ သူတို့ ပိုင်တာပါ။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်ထက်မှာတောင် မြန်မာတွေ ကိုယ့်လယ်ကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ် ။ မျိုးချစ်တပ်မတော်အတွက် လက်တွဲတိုက်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေ မျိုးချစ်တပ်မတော်လက်ထက်ကျမှ လယ်ပိုင်ခွင့် စွန့် လွှတ် လိုက်ရတယ်လို့ ...။ နယ်ချဲ့ အောက်နေရတာမှ တော်ပါသေး ပြောလျင် ဘယ်သူ လွန်လေမည် နည်း ။ လယ်ယာမြေတွေအားလုံးကို နို်င်ငံတော်ပိုင်ဆိုတာ တနိုင်ငံလုံးကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့တဲ ဗိုလ်နေဝင်း...ဓါးပြတိုက်လမ်းစဉ်ပါ။
တိုင်းပြည်ကို မွဲအောင်လုပ်ခဲ့သူ့ ရဲ့ လမ်းစဉ်ပါ။ အဲဒီလမ်းစဉ် အခြေံဥပဒေဟာ...၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ က သေသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါတပ်မတော်စစ်ဦးချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင် ပါးစပ်က တိတိကျကျ ကြေငြာခဲ့တာပါ။ ကျနော်သိရကြားရသလောက်က မူလအစပိုင်းမှာ ဝမ်ပေါင်က လယ်ယာတွေကို တန်ရာတန်ကျေး လျော်ဖို့ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ လယ်တဧကကို ကျနော်တို့ လက်ရှိဈေးထက် ပိုဈေးကြီးပါတယ်။ ၁၉၈၀ ကထည်းက တရုတ်ပြည်မှာ လယ်ယာတွေကို ပြည်သူကသာပိုင်တယ် သတ်မှတ်ပြီး လျော်ကြေးပေးလာပါတယ်။ ဝမ်ပေါင်အတွက် တန်ရာတန်ကြေးပေးရန် ဝန်မလေးဘူးဟု သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိ့ ရေး ဆောင်ပုဒ်ကိုင်ထားတဲ့ ဦးပိုင်ရဲ့ စေတနာ သေးလွန်းလို့ ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပါ။ ဒီနေရာမှာ သမ္မတကြီး ချိန်ထိုးစဉ်းစားဖို့Australia ( Western Australia...GORGON GAS Project ) ကိုနမူနာပေးပါရစေ ။ ဒီဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းဟာ ကမ္ဘာမှာ တနေရာထည်းက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းကြီးပါ။ ၁၉၇၂ ကစတင်ခဲ့တာပါ ။ ပထမဦးဆုံးအစမ်းတွင်းမှာကို ဓါတ်ငွေ့ သိုက်ကိုအောင်မြင်စွာ တူးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကို အော်စတေးလျအစိုးရက အနှစ်နှစ်အလလ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးဆက်တွေကို သုသေသန လုပ်ပြီး..၂၀၀၉ ခုနစ်မှ သြဂုတ်လ မှသာလျင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ခွင့်ြ့ပုချက်ရပြီး တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ချပေးခဲ့တာပါ။ အရင်းအနှီးကလည်း ဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်း ၆၀ ခန် ရင်းနှီရပါတယ်။ အော်စတေးလျ အနောက်ပိုင်းပြည်နယ် ၊ Karratha မြို့ အနီး .. Pilbara ကမ်းခြေအနီး.. Onslow ဒေသမှာ ဓါတ်ငွေ့ဖြန့် ဖြူးရေး ၊ သန့် စင်ရေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရန်လိုပါတယ်။ ပြည်ပတင်ပို့ ရန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကို အရည်ပြောင်းသည့် ပင်မ စက်ရုံကို Barrow Island ဘဲရိုးကျွန်းပေါ်မှာ တည်ဆောက်တာပါ။ ထို Onslow အရပ်ဟာ လူသူ တယောက်မှ မရှိသော ဂန္တာရ သဲကန္တရမြေသက်သက်ပါ ။ အပင်ရိုင်းတောင်မရှင်တဲ့မြေနေရာပါ။ ဒါကိုပင် ဌာနေတိုင်းရင်းသား Australia Aborigines တွေ လူဦးရေ ၂ သောင်းမရှိသူတွေကို သူတို့ လဲ နေထိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့...လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၂- ဘီလျံဒေါ်လာ လျော်ပေးပါတယ် ။
ကနေ့ဝမ်ပေါင်ရင်းနှီးတာက ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံရှိမည်မထင်ပါ။ မြတ်မှာက ဘီလျံ ၃၀ ကျော်၏။ ထိုနေရာကပြည်သူတွေက တောင်သူတွေက ဒီလယ်ယာမြေပေါ်မှာ လုပ်ကိုင်စားလာတာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်။ သူတို့ မှ ဒီလယ်ပျောက်သွားလျင် လုပ်ကိုင်စားစရာမရှိတော့ ။ ဒီလူတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေဟာ...၁၆၄၀ က သာလွန်မင်းကြိးနင့် သားတော် ပင်းတလဲမင်းတို့ လက်ထက် တရုတ်တပ်တွေ (မန်ချူးရိးယား) ကျူးကျော်လာလို့ဗမာ့တပ်တော်မှာ ပါဝင်အသက်ပေးခဲ့ရသူတွေရဲ့ မျိုးဆက်တွေပါ။ ၁၇၆၉ ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီလက်ထက် ( အလောင်းမင်းတရားကြီး၏သားတော် ) ဗမာတပ်တွေထက် အင်အား ၄ ဆ ပိုကြီးမားတဲ့ တရုတ်ကျူးကျော်တပ်မကြီးတွေကို
အကြိမ်ကြိမ်တွန်းခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ယ္ခုလက်ပတောင်းဒေသကလူတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေ စစ်သည်တော်အနေနင့် တိုက်ခဲ့ကြတာပါ စစ်သည်တော်မျိုးဆက်တွေပါ။ ထိုစဉ်က မြန်မာဘုရင်ဟာ ဒီလူတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေကို စစ်သားဆင့်မခေါ်ခဲ့လျင် ဘယ်သူတွေကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့သနည်း ။ ဒီလူတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေသာ အသက်မပေးဆပ်ခဲ့လျင် ယနေ့ဗမာပြည်ဆိုတာ စီဌတိုင်းရဲ့မြန်ကျင့်ပြည်နယ်ဖြစ်နေပြီ။ သမ္မတကြီး ဗမာစကားပြောနေသူ မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ တူနဲ့ခေါက်ဆွဲစားပြီး ဏီ့ဟောင်...ဝမ်ဆွေ့လုပ်နေသူဘဲ ဖြစ်ပါမယ်။ ယနေ့မျိုးချစ်တပ်မတော် ကျွေးကျော်သူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်မှ တရုတ်နယ်ချဲ့ ရန်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့....ထိုတောင်သူတွေ၏ဘိုးဘေးတွေရဲ
့ မျက်နာကိုပင် မထောက်ဘဲ ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်က တရုတ်အလိုတော် ၊ တရုတ်မျက်နာရဖို့ကိုယ်လူမျိုး အချင်းချင်းကို ဘိုးဘေးတွေရဲ့ရာဇဝင်ကို သစ္စာဖေါက်လို့ဗမာအချင်းချင်း ပြန်သတ်တာခံရတယ်လို့ ဗျာ။ ဘယ်လိုမျိုးချစ်လဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်စီစစ်ပါဦး..သမ္မတကြီးခင်ဗျာ ။ ယနေ့ဝမ်ပေါင်ကို သမ္မတကြီး တခွန်းဘဲ မေးပေးပါ ။ ဒီလယ်ယာမြေတွေ တစ်ဧကကို
သိန်း ၂၀ -၃၀ မလျော်နိုင်လျင် ပြန်ကြပါ ။ ခင်ဗျားတို့ ရင်းနှီးထားတာတွေ ပြန်လျော်ပေးပါမယ်လို့ သာ မာမာမေးလိုက်ပါ ။ ၁- ဧကကို သိန်း ၂၀ ဆိုတာ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ပါ။ တရုတ်ပြည်မှာ မရနိုင်ပါ ။ နောက်တခု သမ္မတကြီးကို ပန်ကြားလိုတာပါ ။ လူလွှတ်ပြီး...လှို့ ဝှက်ကင်မရာလေးတွေနင့် လက်ပတောင်းရွာသူ ၊ ရွာသားတွေ နေထိုင်စားသောက်နေရတဲ့ အဆင့်အတန်း နဲ့ယနေ့ အမြတ်မထွက်သေးဘဲ ရင်းနှိးမှုသာ လုပ်နေရသေးတဲ့ ဝမ်ပေါင် တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေ နေထိုင်၊ စားသောက်နေကြသော အဆင့်အတန်း ဘယ်သူက မြင့်တယ်၊ နိမ့် နေတယ်ဆိုတာ ဗွီဒီယိုခိုးရိုက်ပြီး..မြန်မာ့ သတင်းမှာ နိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြပေးပါရန် ပန်ကြားလိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူ နစ်နာနေတယ် ၊ ဘယ်သူက စာနာ ညှာတာရမယ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ ဆုံးဖြတ်ပါစေချင်ဗျာ။ တရုတ်ပြည်သူတွေ ကိုလဲ ဆုံးဖြတ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ တဆက်ထည်း ဥိးပ်ိုင်၏ ဆောင်ပုဒ် ၆ -ခု ရှိရာမှာ ၊ နံပတ် ၆ -ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချီရေး ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးကိုဆွေးနွေးလိုပါတယ် ။ ဥိးပ်ုိုင်ကို အာဏာသိမ်းပြီးမကြာမှီ (၁၉၉၀ ) မှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် ။ တည်ထောင်တဲ့ငွေပမာဏက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀၀ ခန့် ကို ပါဝင်သူတွေက ထဲ့ဝင်စရာမလိုဘဲ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ထဲ့က ဖဲ့ပြီးထဲ့ပေးခဲ့တာပါ ။ ဒါကငွေသားသက်သက်။ ပိုများတာက နိုင်ငံတော်ပိုင် (ပြည်သူတွေ) ပိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေကို လွှဲပြောင်းသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ ဘဏ္ဍာတွေကို စိတ်ထင်တိုင်းသိမ်းယူခဲ့၊ တောင်သူတွေရဲ့ လယ်သာတွေ လျော်ကြေးမပေးဘဲ များစွာ သိမ်းယူခဲ့တယ်။ ဦးပိုင်က တဦးတည်းစားအုံးဆီတွေတင်သွင်းပြီး
ဆီအညံ့စား (စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆင့် ဆီခဲတွေ ) တင်သွင်းပြီး ပြည်သူတွေ ကျန်းမာရေး ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ ဦးပိုင်အမြတ်ရရေးသာ အဓိကထားခဲ့တာ..ယခုပြည်သူတွေ ကျန်းမာရေး စားရိတ်များစွာထွက်နေရပါပြီ။ ဦးပိုင်သွင်းခဲ့တဲ့ကားတွေကိုလည်း.. ပြည်သူတွေ မတရားဈေးကြီးပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဖုံးဆင်းကဒ်တွေ သိန်း ၃၀ မှ ၅၀ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဥိးပိုင်ရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်သက်သာစေခဲသော လုပ်ဆောင်မှုများရှိခဲ့လျင် (ကျနော် မသိတာ တကယ်ပါ) ပြည်သူရှေ့ မှာ(တီဗွီပေါ်မှာ) စာကားရည်လုပွဲလေး (Live Debate) ကျင်းပပေးရဲပါသလား။
စကားရည်လုပွဲလေး မကျင်းပရဲလျင် ဦးပိုင်၏ နံပတ် ၆ ဆောင်ပုဒ်လေး ဖြုတ်သိမ်းပေးပါရန် ( တောင်းဆို ) လိုက်ပါသည်။ ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ စစ်သားပီပီ
ပလီပလာ စကား၊ အလိမ်အညာဆောင်ပုဒ်တွေကို မသုံးသင့်ပါ ။ ဗမာယောက်ျားပီသလျှင် စကားကိုမလိမ်ညာကောင်းပါ။ ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ ဗမာလူမျိုး နင့် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့်အတွက်
ကျနော်တို့ နဲ့ သက်ဆိုင်လို့ ပြောရတာပါ။ အချုပ်အနေနှင့် သမ္မတကြီး၏ သမိုင်းသည် သမ္မတကြီး၏ မိန့် ခွန်း ( နုတ်ထွက်စကား) နင့် ထိုစကားကို မည်မျှ အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည် အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေက သုံးသပ်ပြီး...သမိုင်းရေးကြပါမည်။ You write your own history...HOW YOU WALKS YOUR TALKS.. ကျနော်လည်းရေးလို မရပါ။ သမ္မတကြီးလည်းရေးလို့ မရပါ။ သမ္မတကြီး အငြိမ်းစားယူပြီးသည့်နောက် အမေရိကန်သမ္မတကြီးများလို တက္ကသိုလ်တွေ။ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေက မိန့် ခွန်းချွေပေးရန် ဖိတ်ကြားခံရသည့် ပထမဦးဆုံး မြန်မာ သမ္မတအဖြစ် ကျနော်တို့မြင်ချင်ပါတယ်။ ဒီစကားဟာ ဖါးတာလည်းမဟုတ်သလို ။ ( ကျနော်မဖါးတတ်ပါ ။ ) ကျပ်တာလည်းမဟုတ်ပါ ။ ( ကျပ်တာတော့ လုပ်တတ်ပါသည်)။ ကျနော်တို နိုင်ငံမှာ သမ္မတကိုလူထုက မုန်းတီးခဲ့တာကိုချည်းမြင်နေရတာကို အဆုံးသတ်စေချင်လှပါပြီ ။ သူတို့ သမ္မတတွေလို ပြည်သူက လေးစားချစ်ခင်တဲ့ သမ္မတရှိတယ်လို့ပြချင်ပါတယ်။ အောက်ထစ် အငြိမ်းစားယူပြီးသည့်နောက် ပြည်သူတွေကြား ဝင်ထွက်သွားလာနေသူအဖြစ်မြင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ န.အ.ဖ ..န.ဝ.တ ခေါင်းဆောင်အားလုံးနီးပါး...ပြည်သူကြားမဝင်ထွက်ရဲတာ...ဘာကြောင့်ပါလဲ ။ ကျနော်ဝေဖန်ချက်မပေးတော့ပါ။ သမ္မတကြီးဟာ စေတနာကောင်းတဲ့လူအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ဘဝ(၂၀၀၃) တီဗွီပေါ်မှာ စမြင်ဖူးစဉ်ကထည်းက ကျနော် ဗေဒင်ဟောခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေကို ဒီလူကိုတော့ သူ့ အကြောင်းတော့မသိဖူးဗျာ။ ဥပဓိရုပ်ကတော့ တက်လမ်းရှိမယ့်ပုံ။ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းမဲ့ ရုပ်ဘဲဟု တန်းဟောခဲ့သူပါ။ သမ္မတကြီးအဖြစ်က အငြိမ်းစားယူပြီးချိန် မိတ်ဆွေ ဖြစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လေးစားရတဲ့ရှားရှားပါးပါး တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူမို့ခင်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ ခင်မင်ခွင့်ရနိုင်လျင်ပေါ့ ။ အခု လက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စမှာ ဝမ်ပေါင်ကို မြန်မာတွေအပေါ် အထင်အမြင်သေးမှု ကြီးမားနေတာကို
ပြုပြင်ပေးဖို့နင့် ယဉ်ကျေးလာအောင် ၊ စာနာစိတ်မွေးတတ်လာအောင် သမ္မတကြီး လုပ်ဆောင်ပေးလျင် ပြသနာတွေ ပြေလည်အောင် ညှီနိုင်းနိုင်ပါမည်။ လက်ပတောင်းတောင်ကို လူစိတ်ရှိသူတို့ သာ လုပ်ကိုင်စေသင့်ပါသည် ။ စေတနာကောင်းသည့် ၊ စိတ်ထားကောင်းမွန်သည့် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကို လေးစားစွာဖြင့် ။ ကျနော့်ဆောင်းပါး၏ စေတနာအမှန်ကိုလည်း သမ္မတကြီး မြင်နိုင်ပါရန် မျှော်လင့်လျက် လှိုင်မြင့်
ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး..( ၁၅၅၁ - ၁၅၈၁ ) လက်ထက် စစ်အင်အားအလွန်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်၊ အချိန်များစွာ စစ်ချီခဲ့ရတော့ တိုင်းပြည် စစ်ပန်းပြီး မင်းတရားကြီး လွန်ပြီး..၁၉ နစ်အကြာမှာ ပဲခူးနန်းတော်ကြီး ရခိုင်လက်ထဲကျပြီး မိးတင်ရှီု့ တာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်လက်ထက် - ပထမ
အကြိမ်ယိုးဒယားကို စစ်ချီတော့ ဗမာစစ်တပ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ယိုဒယား ဘုရင်က အညံ့ခံ လိုက်ပါတယ်။ ယုိုးဒယားဘုရင်ဆီမှာ ဆင်ဖြူတော် ၇ စီး (ကောင်)
ရှိသည့်အတွက် ဆင် ၁-စီး လက်ဆောင် အဖြစ်တောင်းရာ ယိုးဒယားဘုရင်က ဆင်ဖြူတောင်းတာကို ချိုးနှိမ်ပြောဆိုသည့်အတွက် စစ်ချီတက်ခဲ့ပါသည်။
နာဂစ် ဥပဒေလို လာဘ်စားတာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ လူသတ် သူခိုးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဦးစီးရေးဆွဲထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာလွန်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာ တဖက်က တရုတ်က
အကြိမ်ကြိမ် ကျူးကျော်လာလို့စစ်ပွဲကြီးတွေ တိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗမာကချည်းနိုင်ခဲ့တာပါ။
ရာဇဝင်မှာ တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေက ထိုဘုရင်ကြိးနစ်ပါးလုံး လက်ထက် တိုင်းနိုင်ငံ အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြီး..တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောခဲ့ကြတာ ရာဇဝင်မှာ
မှတ်တမ်းတင်ယူခဲ့ရသည်အထိ ကြီးကျယ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဘုရင်တွေ၏ ထုံးအတိုင်း မိဖုရားများစွာယူကြသော်လည်း မိဖုရားတပါးတည်းကို အသဲစွဲချစ်နှစ်သက်ခဲ့ကြသော
သာလွန်မင်းတရားကြီးကလည်း မိဘုရားခေါင်ကြီး၏ တိုက်တွန်းမှုအရ သီဟိုဌ်ကျွန်းမှ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးပင့်ဆောင်လာသော စွယ်တော်ကို ဌာပနာကာ...ရာဇမဏီစူဌာ
ခေါ် စူဌာမဏီ (ကောင်းမှုတော်) စေတီတော်ကြီးကို အဖြူထည် တည်ထားလှုဒါန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ စေတီတော်ကြီးမှာ မိမိ၏ ကိုယ်အလေးချိန်နင့် အညီ ရွှေစင်စစ်စစ် ဗုဒ္ဒရုပ်ပွားတော်ကို ဌာပနာထားပါတယ်။
မိဘုရာတပါးတည်းကိုသာ သစ္စာရှိရှိ ချစ်ခင်ခဲ့ကြတာခြင်းလည်းတူ။ (ဗိုလ်သန်းရွှေတို့လို မိန်းမကြောက်ရတဲ့မင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး) ရှာ၈ျဟန်ဘုရင်ကြီးဟာ အင်မတန်ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝသူအဖြစ်လဲ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဗိမ္မာန်တော်အဖြူကြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာခြင်းလည်းတူ ခဲ့တာ ထူးဆန်းစွာတိုက်ဆိုင်နေသလို၊ ခေတ်ပြိုင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်နှစ်ပါးအဖြစ် ပြည်သူတွေ ယနေ့ ထက်တိုင် ချစ်ခင်တာခံရသည့် မင်းနှစ်ပါး ဖြစ်နေပါသည် ။
အဓိက ပြောလိုတာကတော့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ ၏ တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အင်အားရှိမည် ဆိုတဲ့
အလွန်ခေတ် နောက်ကျသည့်အတွေးကို ယနေ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ ပ်ြန်လည်စဉ်းစားဖို့ တိုက်တွန်းရင်း.. ကနေ အာရှရဲ့အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံ ဂျပန် နဲ့ ဥရောပရဲ့အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံ ( ပြာပုံက ရုံးထခဲ့တဲ့ ) ဂျာမဏီ တို့ မှာ လက်နက်အင်အား မရှိတော့..အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေဖြစ်နေပြီး ဥိးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ??? ..ဒီလောက်ဘဲ ပြောပါတော့မယ်။
ဒီလိုနဲ့ စကားစပ်ရင်းက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေ့စဉ် မပါရင် မပြောမဖြစ်တဲ့ ကားပိတ်ဆို့မှု အကြောင်း ပြောရင်းက ကျွန်တော်လည်း ဒါနဲ့ နေပါဦးဗျ ဂျပန်JICA နည်းပညာနဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ မှုကိုဖြေရှင်းမယ့် အစီအစဉ်ရော ဘာထူးလဲဗျလို့ မေးမိတော့..။ မေးမနေပါနဲ့တော့ ဆရာရယ် ပျက်သွားပြီလို့ကြားတယ်။ JICA မကလို့ JICA အဖေပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျားဆိုတဲ့ သမ္မတကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက်နည်း ပညာတွေ ကောင်းကောင်း အောက်ခြေက အကျင့်ပျက်မှုတွေကို သေချာမလေ့လာ မသိရင်တော့ ဘာမှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူးဆရာ။ ဘာလို့ ဆိုတော့ အရင် JICA က ဂျပန်နည်းပညာနဲ့ မြေနီကုန်း မီးပှိုင့်မှာ Auto Censor တပ်ပြီး မီးပှိုင့်ထိန်းချုပ် စံနစ်လည်း ပြန်ဖြုတ်သွား ပြီကြားတယ်..။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဆရာရယ် လိုင်းကားတွေက ယာဉ်ထိန်းရဲကို ငွေပေးထားတော့ မီးပှိုင့်ကို ဘတ်စ်ကားလိုင်း အကြိုက် လိုတိုးပိုလျှော့ အချိန်ကို ညှိပေးနေတာလေ..။ ဒါတပ်လိုက်တော့ သူတို့ စားပေါက် ပိတ်တာပေါ့..။ ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေက လိုင်းကြေးပေးထားတော့ ရပ်ချင်တဲ့ နေရာရပ် တင်ချင်တဲ့ နေရာတင် မောင်းချင်တဲ့ လမ်းက မောင်းနေကြတာ ဆရာလည်း မြင်မှာပါ။ ဒီထက်ဆိုးတာ စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဦးပိုင်က လိုင်းကားတွေ ဆို ဖမ်းတောင် ဖမ်းရဲတာမဟုတ်တဲ့...။ ကြားရတာ နားမသက်သာ စရာပါပဲ...။
. ဦးအောင်သောင်းတို့ကဲ့သို့ ဒံပေါက် ကျွေး၍ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ထောက်ခံပွဲ လုပ်စရာ မလိုသလို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် မိမိပုံတင် မည်သို့ အလုပ်လုပ် နေကြောင်း စွမ်းဆောင်နေကြောင်း ရေချိုးတာက အစ ဖော်ပြ အများမကောင်းကြောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်း ပြောဆိုနေတဲ့ နွား ခြေရာခွက်ထဲက ဖါးသူငယ် ဦးလှဆွေတို့ကဲ့သို့သော လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် အပုံကြီး ကွာခြားလှပေသည်။ အများအလုပ် မလုပ်တာထက် ကိုယ်အလုပ် လုပ်တာကို သက်သေပြပြီး ပြည်သူ့မေတ္တာနှင့် ပြည်သူ့သတင်းစကားကြောင့် ကမ္ဘာ့ အရှိန်အဝါကြီးသည့် သတင်းစာကြီး တခုမှာပင် ဂုဏ်ပြူခံရလေပြီ...။ The New York Time သတင်းစာမှာ ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခံရပြီး ရန်ကုန်ရဲ့ ဟီးရိုး ရပ်၊ သွားဆိုတဲ့ အာဏာတခုကို ခရီးသွား ပြည်သူက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခံယူတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲ ကိုခင်မြင့်မောင်အား ပြည်သူထဲမှ ပြည်သူ တယောက်အနေဖြင့် လေးစား ဂုဏ်ပြုဖော်ပြအပ်ပေသည်။
Posted in: ဗိုလ်ချုပ်အမှတ်တရ
လာမယ့် ၂၀၁၅ခုနှစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နှစ်(၁၀၀)ပြည့်ဖြစ်သလို...
မြန်မာနိုင်ငံရေး အချိုးအကွေ့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နှစ်(၁၀၀)ပြည့်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မှတ်သားဖွယ် အဆိုအမိန့်တွေကို စာရေးဆရာ အလင်းဆက် (IR)မှ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆို ဂုဏ်ပြုစုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ Caricature နဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ပုံတွေကိုတော့ ကာတွန်းဆရာ ဆရာကနောင်မှ ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲပြီး ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီ..။ အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်..။
http://www.mediafire.com/view/312vevnvktaxouk/General_Aung_San.pdf ဒီမိုဝေယံ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အဆိုအမိန့်များ.. (Eng-Myanmar)
လူအသက်တချောင်း ကိုကယ်ဆယ်လိုလျှင်၊ အန္တရယ်တခုကို ကာကွယ်လိုလျှင် ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်ကို သင်မြှင့်တင်လိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ယခုဆောင်းပါးကို Share ပေးကြပါရန် အထူးပန်ကြားလိုပါတယ်။ ... ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်
( ၁ )...လူကူးမျှဉ်းကြားပြဿ.....နာ ရန်ကုန်မြို့ တော် ၊ မန္တလေး မြို့ တော်မှာ နေ့စဉ်နင့်အမျှ လမ်းသွားလမ်းလာများ ရင်တမမနင့် လမ်းကို ကူးသန်းဖြတ်သန်းနေရပါသည်။ လူအများစုမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာမလွှဲ ကိစ္စရှိလို့ မြို့ ထဲသွားလာနေရပါသည်၊ ဘယ်သူမှ ယဉ်တိုက်တာခံချင်လို့ လမ်းကူးနေကြတာ မရှိဘူး ။ ( လူလိမ် အမှုရှာပြီးလုပ်စားအတချို့ ကလွှဲလျှင်ပေါ့ ) ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ လူကူးမျှဉ်းကြားမှာ လူကူးလျှင် ရပ်ပေးသည့် ယဉ်ကျေးမှု တခုရှိ၏။ ကမ္ဘာမှာ အငြိမ်းချမ်းဆုံးသော ဘာသာတရား ထေရဝါဒ လွှမ်းမိုးသော ကျနော်တို့ပြည်မှာတော့ လမ်းကူးသူတွေ မျှဉ်းက ကူးတာတောင် ခွေးပြေးဝက်ပြေး အသက်လု အပြေးကူးရ၏။ ခိုးထားလို့ ချမ်းသာလာသူ တွေက သူခိုးပီပီ မောက်မာကာ မိုက်ရီုင်းပြလိုက်သေး၏။ (သေချင်လို့ လား ၊ အမေနှမ ဆဲဆိုလိုက်သေး၏)။ မနေ့ က မိန်းခလေးတဦးနဲ့ယောက်ျားလေး တဦး လမ်းကိုကူးပြီး အဖွားအိုတဦးအတွက် ထီးတွေထောင် ကားတွေ တားပေးပြီးကူးနေတာ ဖုံနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ လုပ်တာ ဖုံးက ဘက်ထရီကုန်နေလို လို့ လွှတ်သွားတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်မင်းများခင်ဗျား....ပြည်သူလူထုရဲ့နေ့ တဓူဝ အခက်အခဲလေးတွေကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။ လူထုထဲက နေ့ စဉ်သေနေတာ
ငါတို့ အပူမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုး ပြင်ကြဖို့အချိန်တွေ လွန်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ အတိုက်အခံ အဖွဲ့ ချုပ်ရော အာဏာရကြံ့ ခိုင်ရေးပါ ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရယ် ကို အလေးထားပေးကြပါဦးလို့အထူး (ပန်ကြား) ပါတယ်ချင်ဗျာ။ လူကူးမျှဉ်းကြားနဲ့မီးပျွိုင့်တွေမှာ လူကူး မီးပြတဲ့ စက်ကလေးတွေကို လုပ်ခွင့်သာ ချပေးရုံပါ။ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မလိုပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အမတ်မင်းတွေထက် တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာပိုရှိတဲ့ အလှုရှင်တွေ အများကြီး လှုတန်းကြပါလိမ့် မယ်။
လှုချင်သူတွေ များလွန်းလို့နေရာလုနေကြပါမယ်။ (၂) မော်တော်ကားတိုင်း မှတ်တမ်းဗွီဒီယို ကင်မရာတပ်ဆင်ရေး Car Video Recorder တပ်ဆင်ရေး။ ဒါကတော့နှစ်ပိုင်းပါ ။ တဦးချင်း ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ တပ်ဆင်ခြင်းအပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံတော်က မတပ်ဆင်မနေရ ဥပဒေ(အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း) နှစ်ပိုင်းပေါ့။ နိုင်ငံတော်အပိုင်းတော့ အမတ်မင်းတွေကိုကျော်ပြီး ဆရာမလုပ်ချင်လို့မရေးတော့ဘူး။ ကိုယ်သိတာက တစ်ထွာတစ်မိုက်။ သူတို့ က မဟာဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ။ ရွဲ့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး ။ သူတို့ က အမတ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ဘဝင်က ဝေဟင်ရောက်ကုန်တာ။ ငယ်သူချင်း ဖဲရိုက်ဖက်တွေတောင် အဖက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ လူထု အမြင်ပါ။ ဆစ်ဒနီပြန်ရောက်တုံး The World Most Dangerous Road ဆိုတာကို တီဗွီမှာ ပြတယ်။ Russia နိုင်ငံဟာ မြန်မာ န.ဝ.တ တို့ ရဲ့ ဘော်ဘော်လေ။ လာဘ်စားမှုက ခေါင်ခိုက်၊ ကမ္ဘာ့ရေနံ အရံသိုက် အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်၊့ ဓါတ်ငွေ့ သိုက်တွေအများကြီး၊ တင်ပို့ ပါလျက် ပြည်သူလူထုက ဆင်းရဲနေတာ လာဘ်စားမှု များနေလို့ ။ န.အ.ဖ ရဲ့ ဘော်ဘော်အရင်းကြီး ။ ရုရှားဆိုတာ လမ်းအန္တရယ်အလွန်များတဲ့ တိုင်းပြည်။ အခုပြည်သူတွေက ကားသာစုတ်တယ်။ ဂျပန် တပတ်ရစ် ကားအများဆုံး သွင်းတာလည်း နံပါတ်တစ် ရုရှားပဲ.။ ခုတော့ ရုရှားမှာ အများစု (အားလုံးနီးပါး) က ဗွီဒီယိုကင်မရာတွေ တပ်ထားတော့ ယဉ်ထိန်းရဲ့ လာဘ်စားနေတာတွေ၊ ယဉ်တို်က်မှု အဖြစ်မှန်တွေကို အခြားကားတွေကပါ YouTube ပေါ်တင်လာနေကြတော့ YouTube ကနေလဲ တင်တဲ့သူက ဝင်ငွေရ။ အမှုမှာလဲ ရဲတွေ တရားသူကြီးတွေ၊ ဘက်လို်က်ဖို့ ခက်လာတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေ တစတစ ဖြစ်လာနေပါတယ် ။ ရုရှားလမ်းပေါ်က ဟာသတွေ မတရားမှုတွေ တင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပေါင်း ၂-သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ အဖွဲ့ ချုပ်က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အော်နေတယ်။ မတရားမှုတွေ ဖေါ်ထုတ်နိုင်မဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုမဲ့ ဗွီဒီယိုကင်မရာလေးတွေ တပ်ဆင်ဖို့တုိုက်တွန်းပေးပါလို့။ ဖြစ်နိုင်လျှင် Resolution 700 လောက်ရှိတဲ့ ကင်မရာ စင်ကာပူမှာ Singapore $- 40 =.30800 Kyat ဘဲ ကျပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ခရီးကြုံကြိုက်သွင်းလားပြီး ဈေးပေါပေါ ရောင်းချပေးကြပါခင်ဗျာ။ မြန်မာပြည်ကလဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ တင်ကြလျှင် မတရားမှုတွေ ၊ ယဉ်ထိန်းရဲတွေ လာဘ်စားနေတာတွေ၊ လမ်းတွေ အဆင့်အတန်းနိမ့် နေတာတွေ ကမ္ဘာကိုပြသနိုင်လျှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ကို ကိုယ်စီကိုယ်စီ တဖက်တလမ်း (အုတ်တချပ်..သဲတပွင့် ) လက်တွဲပါဝင်ကြပါလို့.... အသိအမြင် တူကြလျင် တိုင်းပြည်ကောင်းလာဖို့၊ အသက်တချောင်း ကယ်ဆယ်ဖို့SHARE ကြပါဥိးလို့အထူးပန်ကြားလိုပါတယ်။ အားလုံးကို လေးစားလျှက် လှိုင်မြင့်
အသစ်တင်သမျှ သတင်းများအား အလိုအလျှောက် ပို့ပေးပါမည်..။ ဦးစွာပထမ အီးမေးလ်လိပ်စာ ထည့်သွင်းပြီး သင့်အီးမေးလ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပါက Activate ပြန်လုပ်ပါရန်... Enter your email address:
ဂျပန်Chirimen(ဝေဖာပိတ်စ) နှင့်ပိတ်စများ,ကီမိုနိုများ ရရှိနိုင်ပါပြီ...
ဂျပန်Uni Textile (Komon Kubo 小紋工房) ကုမ္ပဏီမှ တိုက်ရိုက်မှာယူ တင်သွင်းသော Made in Japan Chirimenနှင့်,ဂျပန်ပိတ်စများ,ကီမိုနိုများ လက်လီ၊ လက်ကား ရရှိနိုင်ပါပြီ..။ ဆက်သွယ်ရန်.. ရန်ကုန် 09508-8948,09500-9700, ဂျပန်ပြည်တွင်း TEL-03-6903-6419/FAX 03-6903-6319 Otsuka ဘူတာမှ ၃မိနစ် hnincherryinternational@gmail.comဂျပန်ပြည်တွင်း မှာယူသူများအား ပို့ဆောင်ပေးသည်.။ Mobile +81-80-3562-1812 , +81-80-4802-1812 ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ Tango,Viber,Line များဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်.. http://www.hnincherry.com/
ဂျပန်Uni Textile (Komon Koubou Company)မှ တိုက်ရိုက်မှာယူ တင်သွင်းသော Made in Japan Chirimenနှင့်,ဂျပန်ပိတ်စများ,ကီမိုနိုများ လက်လီ၊ လက်ကား ရရှိနိုင်ပါပြီ..။ ဆက်သွယ်ရန် မြန်မာပြည်တွင်း 095090-540,09450047598 ဂျပန်ပြည်တွင်း TEL-03-6903-6419/FAX 03-6903-6319 Otsuka ဘူတာမှ ၃မိနစ် hnincherryinternational@gmail.comဂျပန်ပြည်တွင်း မှာယူသူများ အား ပို့ဆောင်ပေးသည်.။ Mobile +81-80-3562-1812 , ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ Tango,Viber,Line များဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်.. ကီမိုနို Sampleဖိုင် ဒေါင်းလုပ်ရယူလိုသူများ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ရယူနိုင်ပါပြီ။။ http://www.mediafire.com/download/l82w9ibs8kyvyh4/Kimono_File.pdf ဘလော့ဂ်ဂါများ နည်းပညာ အကူအညီလိုလျှင်..
Myanmar Creative Web Designer
မဲစာရင်း စစ်ဆေးကြည်ဖို့အရေးကြီးသည်။
နှင်းချယ်ရီစတိုးမှ တိုက်ရိုက် ဖြန့်ချီသော Japanese Green Tea..
(၁)အမေ့အိမ် ပညာဒါန စာသင်ကျောင်းအမှတ်( ၃၅၂) ရန်ကြီးအောင်လမ်း( ရ )ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာကျောင်းတာဝန်ခံ။ ဒေါ်ငြိမ်းတင် (အငြိမ်းစား ဆရာမကြီး)Tel : C/O 661639(၂) ပစ်တိုင်းထောင် ပညာဒါနကျောင်းအမှတ်( ၆၂ရ ) သီတာလမ်း၊ စဉ့်ငူရပ်၊ အောင်ဆန်း၊ အင်းစိန်မြို့ ကျောင်းတာဝန်ခံ။ ဦးလှငွေ ၊ ကိုကျော်ဝဏ္ကTel : C/O 09 4933 6270ကိုငယ်( ၀၉ ၅၁၆ ၂၀၆၀ )အမေ့အိမ်ပညာရေးကော်မတီလှိုင်သာယာ
NLD (BG) သွေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ ၏ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုလျှင် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကတော့
အမှတ်-၈၃၉၊ (ခ)။ မြရည်နန္ဒာလမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ဒဂုံ-တောင်၊ (ကျန်းမာရေးမှတ်တိုင်) ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၂၅၈၈၅ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၇၀၁၆၅ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၀၃၆၁
အပျိုရယ် ၊ ရဲရယ်၊ ငွေငါးသိန်းရယ်၊ ( ကိုယ်ရယ်၊ မင်းရယ် ၊ ပန်းပိတောက်ရယ်) ဆိုတဲ့ သတင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်
အပျိုရယ် ၊ ရဲရယ်၊ ငွေငါးသိန်းရယ်၊ ( ကိုယ်ရယ်၊ မင်းရယ် ၊ ပန်းပိတောက်ရယ်) ဆိုတဲ့ သတင်း၏ ...
ဗဟုသုတ မှတ်သားစရာ မြန်မာစကားပုံများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်) ဗဟုသုတ မှတ်သားစရာ မြန်မာစကားပုံများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်) 1. Adjust burden to strength, like arrow to bow. တန်နှင့်အားကို လေးနှင့်မြှာ...
ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေးဇနီး တိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာပွဲတော် မြင်ကွင်း... ဓာတ်ပ...
အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း အပိုင်း(၂) (တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဒုတိယ ဝင်ငွေ) ဆောင်းပါးရှင်(ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း အပိုင်း(၂) (တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဒုတိယ ဝင်ငွေ) ဆောင်းပါးရှင်(ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ဒေသခံ ဥစား အသာ...
ချယ်ရီမြေမှာ လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ... ...
တရုတ်အစိုးရရဲ့ ပြောဆိုမှုကြောင့် မြန်မာအစိုးရ စစ်ပွဲတွေရပ်ဆိုပဲ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ ပြောဆိုမှုကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ...
"အာဏာရှင် မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွမ်းလောက်လို့လား" (အတွင်းသိ)
"အာဏာရှင် မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွမ်းလောက်လို့လား" (အတွင်းသိ) ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ အခုဆီထမ်း၊ ခုစာကလေးကျော် ဖြစ်တတ်တာက ခေ...
ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ (ရွှေည၀ါဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူသောသာသနာတော်ကို စော်ကားသူ တစ်ယောက်၏ နောင်တတရားတော် အသံဖိုင်
မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ အသံဖိုင် http://www.4shared.com/audio/NGVtFLnp/SWENYAWAR_SAYARTAW.html
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ ပျော်ဘွယ် ဟောပြောပွဲအသံဖိုင်....
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ လူငယ်နဲ့အမွေ လူငယ်နဲ့ အချစ်အသံဖိုင်....
စိတ်ညစ်စရာတွေ ပြေပျောက်အောင် နားထောင်ကြည့်ပါဦး။(၂၀၁၀)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘောလုံးပွဲ
နှစ်ပြားမတန်သီချင်း။...။ (Download ရယူရန်)
ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁-၂၆ ဖတ်ချင်ရင်
(Download ရယူရန် )